I-Premium Countryside Cottage w/ XL Sauna & Hot Tub
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguMattias
Ucoceko ngundoqo! Indlu yethu igcinwa icocekile ngalo lonke ixesha. Ngenxa yokusasazeka kwe-COVID sinikela ingqalelo ekhethekileyo kuyo yonke imiphezulu kunye neekhinobho zomnyango ukugcina iindwendwe zethu zikhuselekile.
Ufika kwikhaya elihle labucala ngokupheleleyo eParila emva kwemizuzu engama-30 kuphela ukusuka eTallinn. Le ndlu ibonelela ngokufikelela ngokulula kwiindawo eziphambili zokukhenketha iLahemaa kunye neKõrvemaa kwaye ilungele izibini okanye izihlobo ukuba zimke esixekweni.
Siyakwamkela kwindawo yethu epholileyo, kodwa yendalo yanamhlanje. Nokuba ufuna ukonwabela indawo yomlilo efudumeleyo kunye nesauna ngaphakathi okanye isibhakabhaka esineenkwenkwezi kwibhafu eshushu ngaphandle, sikufincele nakwimozulu yase-Estonia engalindelekanga. Nceda ugcine engqondweni ukuba ibhafu eshushu ayinamaqamza ngoko izandi zendalo okanye iincoko nabahlobo ziya kuba mnandi ngakumbi. Ngexesha elinye ukufudumeza kwe-tub eshushu kufakwe kwixabiso, ngokulandelayo kukho umrhumo womlilo we-20 €.
Iimini nobusuku be-Estonian Summer Paradise zixabiseke kakhulu. Awuboni nabaphi na abantu balapha ngaphakathi. I-BBQ inyama yakho enejusi kunye/okanye imifuno enencasa, yityele ngaphandle kwithafa yethu enkulu kwaye xa ilanga lishushu kakhulu umthunzi uyakhusela ekukhanyeni kwe-UV. Ukufunda incwadi entle ekujingeni kunye nokuba ne-power-nap emva koko kumoya omtsha kwenza iintsuku zeholide zingalibaleki.
Iinyanga ezimnyama zase-Estonia zijika i-cottage ibe yiWinter Wonderland. Thatha uloliwe ukhwele kwikhephu elipholileyo nelimhlophe emini kwaye uvumele umphunga we-eucalypt uvule imiphunga yakho kwisauna eshushu. Emva koko phumla esofeni kwigumbi lokuhlala elifana ne-atrium, ukumamela umlilo oqhekezayo kunye nokufudumala umphefumlo wakho ngobushushu bomhlaba obuvela kwiziko.
Njengoko imini idlula kwaye ubusuku buhla, igadi iyakhanyisa idala umbono omangalisayo, yandisa ubusuku behlobo kunye neentsuku zasebusika.
Ufika kwindlu entle yasemaphandleni eParila emva kwemizuzu engama-30 kuphela ukusuka eTallinn. Le ndlu ibonelela ngokufikelela ngokulula kwiindawo eziphambili zokukhenketha iLahemaa kunye neKõrvemaa kwaye ilungele izibini okanye izihlobo ukuba zimke esixekweni.
Umbuki zindwendwe ngu- Mattias
Mna okanye uTody siza kufumaneka kwincoko yakwa-Airbnb, kuWhatsapp okanye ngomnxeba. Qhagamshelana ngokukhawuleza ukuba kukho nayiphi na imibuzo okanye iingxaki ezenzekayo.